warkii.com » Taageerayaasha Liverpool Oo Noqonaya Kuwa Ugu Horeeya Ee Loo Ogolaado Inay Garoomada Ku Soo Noqdaan & Sababta Oo La Shaaciyay
Taageerayaasha Liverpool Oo Noqonaya Kuwa Ugu Horeeya Ee Loo Ogolaado Inay Garoomada Ku Soo Noqdaan & Sababta Oo La Shaaciyay
Taageerayaasha kubada cagta ayaa loo ogolaan doonaa inay soo galaan garoomada markii ugu horeysay tan iyo bishii March marka garoonka Wembley lagu ciyaarayo koobka Community Shield 30ka bisha Agoosto.
Kooxda hanatay horyaalka Premier League ee Liverpool iyo kooxdii soo qaada koobka FA Cup Arsenal ama Chelsea ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee ku soo laabta garoomada iyadoo koobkaan uu daah fur u yahay xilli ciyaareedka 2020-21.
Xiriirka kubada cagta Ingariiska ayaa u arka koobka Community Shield midkii lagu tijaabin lahaa in taageerayaasha ay ku soo noqdaan garoomada iyadoo FA-ga uu xaqiijiyay inay taasi dhici doonto 30ka bisha Agoosto, sida ay qortay jariirada Telegraph.
Ma jirto kulan Premier League ah oo ay taageerayaal garoonka soo galeen tan iyo markii ay Leicester City 4-0 ku xaaqday Aston Villa 9kii bishii March iyadoo wixii ka danbeeyay lagu ciyaarayay garoomo faaruq ah.
Maamulka Premier League ayaa doonaya inay taageerayaasha ku soo celiyaan garoomada xilli ciyaareedka soo socda, iyagoo doonaya inay soo dedejiyaan qorshaha dowalada oo ah inay taageerayaasha garoomada ku laaban karaan 1da bisha October.
Jadwalka xilli ciyaareedka soo socda ayaa la qaabeyn doonaa Jimcaha marka ay kulan yeeshaan 20ka kooxood ee horyaalka iyadoo la filayo in loo codeyn doono inuu xilli ciyaareedka bilowdo 12ka September.
Ilaa iyo hadda ma cada baratakoolka ay taageerayaasha raaci doonaan marka ay garoomada ku soo laabanayaan iyadoo kooxaha ay rajeynayaan in loo ogolaan doono in garoomada la buuxiyo boqolkiiba 50 si ay u raaligeliyaan taageerayaasha iibsaday tikidhada xilli ciyaareedka oo dhan.
Kooxo badan sida Arsenal ayaa si weyn ugu tiirsan lacagta ka soo gasha maalmaha ciyaaraha sidaasi darteed waxay si weyn u doonayaan in taageerayaasha ay soo xaadiraan garoomada.